Puntland oo ka hor-timid sharcigii uu saxiixay Farmaajo una digtay shirkado caalami ah – Hornafrik Media Network
Maamulka Puntland ayaa ka hor-yimid sharciga batroolka Soomaaliya ee uu dhowaan saxiixay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo.
Qoraal kasoo baxay madaxtooyada Puntland ayaa lagu sheegay in sharcigaas ay ku jiraan qodobo “kasoo horjeeda dastuurka qaranka iyo hanaanka federaalka ee lagu heshiiyey,” illaa laga saarayana aysan qeyb ka noqon doonin fulintiisa.
Qodobada Puntland ay xustay ayaa waxaa ka mid ah qodobka 44-aad ee dastuurka, kaas oo ka hadlaya qeybsiga kheyraadka dalka, waxuuna oo dhigayaa in ay ka wada-hadalaan dowladda dhexe iyo dowladaha xubnaha ka ah.
Puntland waxay sheegtay in sharciga uu sidoo kale ka hor-imanayo qodobada 4-aad, 50-aad, 51-aad, 86-aad iyo 142-aad ee dastuurka dalka.
Maamul goboleedka Puntland ayaa shirkadaha caalamiga ah ee danaynaya in ay sahmiyaan dalka, isla markaana maal-gashadaan shidaalka Soomaaliya uga degtay in ay ku howl-galaan sharcigan, waxayna u sheegtay in ay ka fogaadaan.
Hoos ks akhriso war-murtiyeedka Puntland